Iinkqubo zeMo-Sys zeKhamera zeNtshukumo zoMatshini zibonisa indlela yokuNgenisa iMifanekiso eNtsha-I-NAB bonisa iiNdaba ngoSasazo lweBeat, Umsasazi wase-NAB Show-NAB bonisa u-LIVE
ikhaya » Okufumaneka » Iinkqubo zeMo-Sys zeKhamera zeNtshukumo zoMatshini z Paves indlela yeNdlela eNgcono yeFilimu
Iinkqubo zeMo-Sys zeKhamera zeNtshukumo zoMatshini z Paves indlela yeNdlela eNgcono yeFilimu
Njengomboniso ophakathi, ifilimu ifaka izinto ezininzi zobugcisa ngaphakathi kwesakhelo. Kwinqanaba elisisiseko, ukwenza ifilimu kulula njengokusebenzisa ikhamera eqhelekileyo ukwenza iifilimu zasekhaya ezisebenza njengenxalenye yenkqubo yokuvavanywa kwangoko. Namhlanje, ifilimu inokwenziwa kwisabelo-mali esisezantsi ngekhamera yedijithali esemgangathweni. Nangona kunjalo, ukusebenzisa imizekelo efana naleyo ikhankanyiweyo, ngokulinganisela njengoko bekwimeko enobuchule kwezobuchwephesha, kusebenza kuphela ekukhonzeni indlela yesikolo esidala kakhulu ifilimu. Umboniso bhanyabhanya uqhubekile ukuvela njengoko ubuchwephesha buwenzile ukuza kuthi ga ngoku okona kulungileyo xa kuziwa ekuphuculeni ifilimu yamava abalulekileyo bayakwazi ukuvelisa.
Xa kufikwa kumda wetekhnoloji yefilimu enqamleze kuyo, oopopayi kunye nokuhamba komhlaba ngaphandle kwamathandabuzo yeyona ndawo inomdla kwaye inomdla ekungeneleleni kuyo. Ezi ndawo, nangona zintle kakhulu, zifuna iinkcukacha ezininzi ukuze amandla abo asetyenziswe ngokupheleleyo, kwaye ukuze oku kwenzeke iteknoloji ebaxhasayo kufuneka ibonelele ngeendlela zokusebenza ezifanelekileyo. Ukuba ubuya kujonga kwiifilimu apho kuchaphazeleka khona kwiindawo ezithile, unokujonga imizekelo efana UCaptain America uMphindezeli wokuqala, Walle, yaye I-Case Curious ye-Benjamin Button, ezingakwazanga nje ukuphucula, kodwa ziphinda ziphinde zenza eyona ndlela isisiseko yomfanekiso kwinto engaphaya kwento enokuphunyezwa ngumyili wempahla okanye CGI. Kulapho ke Iinkqubo zeMo-Sys zeKhamera yeNkqubo Ungena emfanekisweni ngokusetyenziswa kweekhamera zabo ezinobucukubhede kunye nezixhasi ezahlukeneyo zetekhnoloji abazilungiselele iifilimu ezahlukeneyo kule minyaka ilishumi idlulileyo.
Kwabo bengaqhelananga nomsebenzi wabo, i-Mo-Sys Camera Motion Systems ubugcisa bekhamera yeemveliso zobugcisa bemveliso yefilim kunye nosasazo. Xa kufikelelwa kwinqanaba apho iqela labo elimangalisayo kunye neemveliso zekhamera zifikelela khona, iinjongo zabo zijolise ngqo kwiintloko ezikude kunye nokulawulwa kokuhamba, ukusasazwa kweearobhothi, ukujonga ukulandelwa kwekhamera ye-AR, imveliso ebonakalayo kunye neVR, kunye nokujonga okusekwe. Ngamagama alula, i-Mo-Sys isebenza ukuxhasa itekhnoloji yefilimu njengeyona ndlela yokuphucula imbonakalo enzima esiyibonayo kwifilimu ngokobunto bayo bokudlulisa kodwa sisazibuza ngemibuzo yokuba yaphunyezwa njani.
Umzekelo omnye wokusebenza kukaMo-Sys ubandakanya ifilimu ubunzima, i-2013 uOscar Onyuliweyo weSayensi-Fi Epic ekhokelwa nguAlfonso Curon, okuza kusondela kwiminyaka yayo emithandathu. Igalelo likaMo-Sys kwi ubunzima beza nenkxaso ebonelelwe kwifilimu ye-DP, u-Emmanuel 'Chivo' Lubezki ngentloko yabo ekude, i I-Lambda.
Imodeli yamva nje yeWundda, iMo-Sys Lambda 2.0, yindawo ekude ye-110 Ib 2 / 3 axis eyi-mbali ene-control control element. Yenzelwe ngokukodwa iipakeji zekhamera enkulu, kwaye esi sisiphumo sendlela elungiselelwe ngayo iipleyiti zekhamera yeeteleskopu, evumela ukuba kwenziwe uhlengahlengiso olukhawulezayo nolula olwenzelwa nabuphi na ubungakanani bepakeji yekhamera nkqu ye-3D-stereoscopic mirror rigs. I-Lambda 2.0 iza kunye necandelo lokulawula isikrini elisebenzayo enobungane kwaye isebenzise ngokupheleleyo imbonakalo yomntu enomdla eyenza ukutshintsha useto, ukurekhoda intshukumo kwaye uyidlale ibuyise inkqubo ekhawulezayo nelula. Nayo nayiphi na idatha yokuhamba inokurekhodwa kwaye isetyenziselwe i-VFX.
Enye into ebalaseleyo yeLundda, kukuba imodareyitha yayo apho kwimeko apho intloko-ye-eksisi ezimbini inokufuna uhlengahlengiso, inokuphakanyiswa ngokulula ibe yimodeli ene-axis emithathu ene-360˚ roll axis. Kwakhona, ukuba uzinzo lwe-Gyro kufuneka ukongezwa, ke loo nto ngekhe ibekhona ngaphandle kwendawo enokubakho. I-Lambda 2.0 ikwanayo i-zero backlash, oko kuthetha ukuba akukho micimbi yokukhupha, kwaye ke akukho luhambo. I-Lambda 2.0 ikwenziwe iigiya ezikhethekileyo eziye zangqineka zinokuthenjwa kwaye ziyomelele, ngelixa zikwazi ukumelana nobushushu obufudumeleyo nobushushu bemeko-bume ezinokuthi zisongele ukumisela nokunciphisa iintshukumo zalo xa kusenziwa umboniso bhanyabhanya kufuneka baxhomekeke kwiindawo ezixeliweyo.
Xa ujongene nomxholo wezinto eziguqukayo zekhamera, i-Lambda 2.0 ilunge kakhulu kwicandelo. Ngoku, kumcimbi wefilimu enjalo ubunzima, ezifuneka ngaphezulu kwee-lambdas ezine, zisetyenziselwa ukuxhasa iBot & Dolly, eyi-high usahihi echanekileyo ye-robotic motion rig.
Ngokusebenzisa ezi-Lambdas, u-Emmanuel Lubezki wathi, Phantse konke ukudubula kwenziwa entloko ye-robotic camera from Mo-Sys, " kwaye basebenzise ukubuyela umva kwentloko eyi-zero kunye nokuguquguquka okuphezulu okucacileyo njengendlela yokunciphisa amathunzi kubuso bomdlali webhola ngexesha lokudubula okuthile. Intsebenziswano phakathi kwe ubunzima Iqela labasebenzi beefilimu kunye noMo-Sys baphinde bacaciswa ngumphathi wefilim VFX, u-Tim Webber, owathi xa ikhamera yayihamba endaweni yomntu, isuka nje yajikeleza abalinganiswa, ngelixa itshintsha isuka kumjikelo obubanzi bendawo Vala incoko yababini abasondeleyo phakathi kwabalinganiswa, kunye nokuphikisana. Le nto yenziwe konke emva kwemizuzwana nje, kwaye umsebenzi wekhamera wolu phuculo wafuna i-Lambda, eyayivumela ikhamera ukuba ihambe ngokukhululekileyo ngabalingisi, kwaye ngaphandle kokuzibeka nakwezinye iindawo ezingathandekiyo ezinikezwe ukubonwa okuntsonkothileyo kwifilimu efana ubunzima apho umlinganiso umanyayo ngokujikeleza indawo ixesha elingaphezulu kweyure enesiqingatha sexesha lesikrini. Iintshukumo ezintsonkothileyo eziboniswe kwifilim ngoku bezicwangcisiwe ngaphandle kokusebenzisa i choreography enkulu kwaye zibhalwe ngaphakathi Autodesk Maya kwaye kamva ngexesha lokuvelisa elidlalwe ngasemva yiRob & neRobly irobhothi. Nangona kunjalo, isidingo sokugcina umkhondo kwezi meko zininzi zaqaqanjiswa ngakumbi ngumsebenzi omkhulu weLiverda kwaye sisakhono sokwenza ukusebenza okunokutshintshwa kunye nokuhamba kwekhamera ngokukhululekileyo.
U-Olli Kellmann, umphengululi wefilimu oshukumayo wathi "Ezi zinto kufuneka zivavanywe, kwaye zininzi izinto ezinokuthi ziphazamise intshukumo iseti enganampembelelo kwikhamera ebonakalayo ngaphakathi kwendalo ye-CG. Izinto ezinjengamandla eemoto, kunye nendlela isantya esonyuka ngayo kunye namandla adonsela phezulu anokuyichaphazela i-rig. " Ukuqhubela phambili nokusombulula imiceli mngeni ebebalindelwe yona, u-Ollie kunye neqabane lakhe uRaul Rodriguez baqala ukudlala iintshukumo esele zirekhodiwe emva nge10% yesantya sabo sokwenyani emva koko bayonyusa yonke indlela ukuya kwi-100%. Ngokudlala ngokuhamba kancinci, babekwazi ukutshintsha nayiphi na intambo kwaye benze uhlengahlengiso nangaliphi na ixesha entloko ifikelele umda wayo. Nangona kunjalo, u-Olli akazange abone uninzi lwalo micimbi ngexesha lenkqubo, enikezwe ukuba babefudula bebaninzi kangakanani na, nto leyo icacisa ngakumbi umsebenzi oncomekayo we-Lambda intloko.
Intloko kaLambda ikwabonelele ngeChivo ukhetho lokufaka umthwalo kunye nokudlala kwakhona iintshukumo ezenziwe kwangaphambili ezazisetyenziswa kwifilimu. Ngoku, nangona ezi ntshukumo bezirekhodwe kwangaphambili, isibakala sokuba i-Lambda ibonelele ngokuguquguquka okukhulu ngexesha lenkqubo yokudubula yenza kuphela izinto ezithile ezinje ngokuchwechwa kwakhona komfanekiso, ukucokiswa kweentshukumo ezithile zekhamera, kunye nexesha lokuphendula elifunekayo ukuhambelana nomdlalo iintshukumo zabadlali. Yonke i-choreography nokucwangciswa kwehlabathi kungabandakanywa enkundleni, kodwa ukushukumiseka kunye nexesha lokuseka umsebenzi kusetyenzwa nakho kuyimicimbi eyimfuneko, ethi iLimonda iphucule kakhulu.
UMichael Geissler, Umnini kunye noMsunguli, iiNkqubo zeNtshukumo yeKhamera yeMo-Sys
I-Lambda yenye nje yemimangaliso emininzi yezobugcisa ebonelelwe nguMo-Sys kwaye isisiseko esihle sobukrelekrele kunye nomnini uMichael Geissler, owathi kudliwanondlebe lwe2017 wathi, "Ndiyisisombululo solver. Yile nto ndiyithandayo. ” eyamisa ngokwenene umxholo wokuqala we-Mo-Sys. Igalelo labo ekunikezeleni uphuculo lwetekhnoloji kwinto yezobugcisa ye ifilimu Inkqubo, engalulanga konke konke, kwaye iba ngumceli mngeni ngakumbi njengoko itekhnoloji inyuka, ibonakalise amandla abo ukubonelela ngokuhamba ngakumbi, ukuguquguquka kunye nokuphindaphinda okuncinci njengendlela yokugubungela umhlaba ngakumbi ngexesha lokushicilelwa kweziganeko ezisebenza kungekuko ku-wow kuphela. abaphulaphuli, kodwa basebenze ukukhuthaza amagcisa kwihlabathi liphela anomdla wokusebenza kwifilimu kunye oopopayi.
Ukufumana okungakumbi malunga neeNkqubo zeMo-Sys Camera Motion, ungabandwendwela online www.mo-sys.com, okanye ungazijonga Umboniso we-2019 IBc eAmsterdam in Iholo 6 - 6.C12 kunye Iholo 8 - 8.F21.
Mamela i-Aurora Health Campaign / i-Colonie Injineli yokusasaza Ukusasazwa kwezobunjineli Ukusasazwa-iMedia Media Ukusasazwa kwezeNtlalo Ukusasazwa-SocialMeida Igalelo Digital Nirvana YE UGraham Chapman uVikelelwa kuMhleli IBC kuhlolwa kweendaba SJGolden - Iintetho kunye nemisrya Umxholo ophantsi IKOLONIE / Chicago I-Ultra HD Forum Iinkqubo ezahlukeneyo Injini yeVidiyo ndiphila	2019-07-31
Previous: Indawo yokuqala yokuvelisa yase-Saudi Arabia ibandakanya iBasight
next: I-IBC2019 ibona izisombululo ezilula ezenzelwe ukufakwa lilifu eziqinisekisa ukuba iinkampani zemidiya kunye nezolonwabo zihlala ziphambili kwethekhnoloji